ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက် စစ်ပွဲသတင်းများစုစည်းဖော်ပြမှု – PVTV Myanmar
⚠️စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဝက်လက်မြို့နယ်တွင် ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန် ကုန်ကြီးကွေ့အနီးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ကို ဖောင်းဒိုင်းအဖွဲ့က ရှေ့ထွက် မိုင်း ၂ လုံးဖြင့် တိုက်ခိုက်ရာ စစ်သား ၁ ဦးသေဆုံးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
⚠️ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနစ်အချိန် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာများကို ဖျက်ဆီး၍ ပြန်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို ဒေသကာကွယ်ရေး မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုက ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာ စစ်သား ၂ ဦးသေဆုံးကြောင်း၊ အဆိုပါ မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်မှုကို 11 BrothersRevolutionForces က ဦးဆောင်၍ မြောင်မြို့နယ်T.G.Rပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်(TGR)နှင့် 27RevolutionForces(မြင်းခြံ) မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုမှ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
⚠️ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီတွင် မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်နှင့် မတ္တရာမြို့နယ် အစပ် ၀သုန္ဒရကျေးရွာအနီး နှောပင်မောင်နှမ နတ်နန်းနားတွင် စစ်ကား ၂ စီး မိုင်းဆွဲခံရကြောင်း၊ ပစ်ခတ်သံများလည်းကြားရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရပါတယ်။
⚠️စစ်ကိုင်းတိုင်းထီးချိုင့်မြို့နယ်တွင် ယမန်နေ့ညပိုင်း စစ်ကောင်စီတပ်ယာဉ်တစ်စီးကို မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ၊ စစ်ကောင်စီတပ်သားများ အသေအပျောက်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ယမန်နေ့ဇန်နဝါရီ ၂၄ရက် ည ၇နာရီ ၂၀မိနစ်ခန့်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်၏ ကင်းလှည့်ယာဉ်ကို မြထောင်လမ်းဆုံအနီးတွင် Fire Dragon-HPDF မှ မိုင်း ၅ လုံးတစ်ပြိုင်တည်းခွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်း၊ မိုင်းမိတဲ့နေရာတွင် ကားထိုးရပ်သွားပြီးရမ်းသန်း ပစ်ခတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
⚠️မကွေးတိုင်း၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ် သက္ကယ်ကျင်းရွာ အနောက်ဘက်သို့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး စစ်ကြောင်းထိုးလာသည့် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးမိတ်ဖက် မကွေးတပ်ရင်း (၁) တို့ကြား ယမန်နေ့ (ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်) နေ့လယ် ၁၂ နာရီကျော်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီဘက်မှ စစ်သား ၆ ဦး သေဆုံးကာ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၀ ဦးကျော် ရှိခဲ့ကြောင်း၊စစ်ကောင်စီ၏ လက်နက်ခဲယမ်းများနှင့်ကျည်များ သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
⚠️ရေးမြို့နယ်၊ သထုံမြို့နယ်နှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်တို့တွင် စစ်ကောင်စီတပ် ဖွဲ့များကို PDF နှင့် KNLA တပ်များက တိုက်ခိုက်ရာ စစ်သား ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၂ ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်များက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ မိုးကောင်းကျေးရွာနှင့် ပုတိမ်ရိုးကျေးရွာကြား ရန်ကုန်-မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်တွင် ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်၌ စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်း မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီး စစ်သား ၄ ဦးသေဆုံးကာ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကို KNLA တပ်မဟာ ၁၊ တပ်ရင်း ၂ တပ်ဖွဲ့နှင့် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အထိအခိုက်မရှိ ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်း သထုံ PDF ထံမှ သိရှိရပါတယ်။
မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရသော စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည် အနီးပတ်ဝန်းကျင်သို့ ၁၀ မိနစ်ခန့် ရမ်းသန်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ကားလမ်းနံဘေးရှိ နေအိမ် ၁ အိမ်မှ ကလေးငယ် ၁ ဦး ခြေထောက် ကျည်ဆံထိမှန်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရှိရပါတယ်။
⚠️ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ တဂေး ကျေးရွာတွင် နယ်မြေကျူးကျော် စစ်ကြောင်းထိုးလာသော စစ်ကောင်စီတပ်ကို နယ်မြေခံ KNLA တပ်ရင်း ၁၇ က တိုက်ခိုက်ရာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၃ ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
⚠️မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ ရန်မျိုးအောင် ရပ်ကွက် သလ္လာဝတီ ၁ လမ်းရှိ ရန်မျိုးအောင် ပျူစောထီးအဖွဲ့၏ ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် “ရာဆင်း” ကို YGF အဖွဲ့မှ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ ပစ်ခတ် ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး အဆိုပါ ပျူစောထီးသေဆုံးမှုကို စစ်ဆေးရန် လာသည့် အဖွဲ့ကို YGF က မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီလက်ပါးစေ ရဲ လေးဦး သေဆုံးကာ ၅ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း YGF က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို ရေးမြို့နယ် ၊ ကလော့နှင့် ချောင်းတောင်ကြား ရေသနုတ်ဘုရားအနီးတွင် YGF အဖွဲ့သားများက အသင့်စောင့်ကြို တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပါ။
အဆိုပါ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုတွင် YGF အဖွဲ့သားများက တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက် ကျဆုံးမှုမရှိဘဲ အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွါနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
⚠️အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထဲရေးနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ် သတင်းအချက်အလက်များ⚠️
ရွှေဘိုမြို့မှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြ သပိတ်ပြုလုပ်
သတင်းအချက်အလက်များအရ(၂၄. ၁. ၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင်
စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၄ဦး သေဆုံးပြီး
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ – ၉ဦး
မြေပြင်မှာ ယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက် ပို၍ ဖြစ်ပွါးနိုင်ပါတယ်